Mahajanga:fitsidihana fampitam-baovao nataon’ny Ministry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana | Région Boeny
Notanterahina ny zoma 17 febroary 2017 tao amin’ny Bloc administratif Ampisikina Mahajanga, ny fivoriana mikasika ny ara-toekarena, ara-tsosialy ary ny fandriampahalemana.
Natao izany fivoriana izany nahafahana nampita fa efa miroso tokoa isika amin’ny lafiny fampandrosoana ary efa tsara ny ezaka vita tamin’ny taona 2016 hoy ny Ministry ny Toekarena sy ny Teti-pivoarana no sady Ministry ny Angovo mpisolo toerana, ny Jly Herilanto Raveloharison.
Noresahina tamin’io andro io ihany koa ny ezaka izay mbola tsy maintsy ho atao amin’ity taona 2017 ity, ary nasiany tsindrim-peo manokana ny tokony hisian’ny fifandrindrana eo anivon’ireo politikan’ny seha-piharina aty amin’ny faritra.
Nomarihiny fa ilaina hoan’ireo tompon’andraikitra aty amin’ny faritra ny mahalala ny tena vaovao marina amin’ny tontolon’ny toekarena eo aminy. Andraikitry ny Ministeran’ny Toekarena kosa no manoritsoritra ireo tetik’asa maika indrindra, ny mampahafantatra sy manome atonta-marika mba tsy hisy atontanisa diso entin’ireo mpisehatra manao adi-hevitra ara-toekarena.
Nisy ny fanontaniana izay napetrak’ireo mpivory tamin’ny Atoa Ministra, mikasika ny famatsiam-bola azon’ny fitondram-panjakana tany Paris, Frantsa. Io vola io dia hoentina mamatsy ireo tetik’asa izay efa voafaritra tsara, ary nampahafantarina an’ireo Mpamatsy vola tany Paris. Ary amin’izao fotoana izao hoy izy dia efa misy rafitra eo anivon’ny Fiadidina ny Repoblika manara-maso sy mitantana ireo famatsiam-bola azo ireo.
Nanotrona ny Ministra tamin’io fivoriana io, ireo olom-panjakana isan’ambaratongany, hatrany anivon’ny fokontany, izay notarihin’ny Préfet an’i Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana sy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.